रज्जा रानी की राज्जा रानी ? नाम त यस्तो, फिल्म कस्तो ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
रज्जा रानी की राज्जा रानी ? नाम त यस्तो, फिल्म कस्तो ?
फिल्मी फण्डा । नायक नाजिर हुसेन र नायिका केकी अधिकारी अभिनित फिल्म रज्जा रानी उर्फ राज्जा रानी आगामी पुष २१ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनको लागि तयार भएको छ । निर्माण पक्षले फिल्मको प्रचार सामाग्री पनि विस्तारै सार्वजनिक गर्दै आईरहेको छ । केही हप्ता अगाडी फिल्मको टिजर सार्वजनिक गरिएको थियो भने यसै हप्ता फिल्मको गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
गीतलाई सामाजिक सञ्जालमा राम्रो भिउज पनि भईरहेको छ । प्रसंग के हो भने फिल्मको दुई छुट्टा छुट्टै प्रचार सामाग्री सार्वजनिक गर्दा फिल्मको नाम पनि दुई वटै रहेको बुझिएको छ । टिजर सार्वजनिक गर्दा फिल्मको नाम रज्जा रानी रहेको छ भने फिल्मको गीत सार्वजनिक गर्दा फिल्मको नाम राज्जा रानी राखिएको छ ।
फिल्मको नाम वास्तविकमा के हो ? निर्देशक स्वयंम झुकेका हुन् या निर्देशकलाई थाहा नभएका हुन् । की यी दुबै नामको दुईटा फिल्म हो, त्यो भने निर्देशकलाई नै थाहा होला । फिल्मको क्याप्टेन अर्थात निर्देशक जस्तो महत्वपूर्ण पद पाएका यम थापाको आँखा कहाँ थियो । जब आफ्नै फिल्मको नाम दुई थरी हुन गयो । यस्तो निर्देशकले फिल्म कस्तो बनाएको होला, त्यो प्रदर्शन पछि पक्कै थाहा हुनेछ ।
फिल्मलाई रमेश एमके पौडेलले निर्माण गरेका हुन् । पौडेलले यस्तो निर्देशकलाई कसरी विश्वास गरे होलान्, त्यो पनि उनैलाई थाहा होला । जे होस्, अहिले फिल्मको नाम थरी–थरी आईरहेका छन् भोली फिल्म पनि खै के–खै के भने जस्तै थरी–थरीका नहुन् भने मात्र हाम्रो सुझाव हो ।
रज्जा रानी नाम भएको टिजर हेर्नुहोस् :
राज्जा रानी नाम भएको गीत हेर्नुहोस् :